Ihowuliseyili brand Customizable 160 wosula ngebhotile nganye 75% wosula utywala uMthengisi kunye noMvelisi | Ngcono
Igama lemveliso: I-Premium ithambile kwaye yomelele iipesenti ezingama-75 zotywala
Inombolo yomzekelo: I-BT-001
Izinto: Akukho okwalukiwe
Izinto ezisebenzayo: Utywala 75%, Nov-ephothiweyo, Ro-amanzi
Izithako ezingasebenziyo: Amanzi, iAloe Vera, iCitrus Scent
Ubukhulu: 5.9 "* 7.1"
Amacandelo ngekanti: Iifayile ezili-160
Ukusetyenziswa ngokukodwa: Antibacterial, disinfection kunye nokucoca.
Iinkcukacha zokupakisha： Iitoti ezili-18 / ibhokisi
Umgangatho ophezulu ama-75% oTywala ococekileyo
Sebenzisa izandla ezicocekileyo ngaphambi kokutya okanye emva kokudibana neentsholongwane / ukutya okuncangathi kunye nokucoca imihla ngemihla, ngakumbi xa isepha namanzi zingafumaneki.
Iqulethe iAloe Vera yokuthambisa.
Ukucoca kunye nokunciphisa iigugu kunye neebhaktheriya ezinokubangela izifo xa isepha kunye namanzi engekho.
Ukusetyenziswa kwangaphandle kuphela. Inokutsha, gcina kude kwaye ungagcini kufutshane nobushushu okanye ilangatye elivulekileyo Musa ukusebenzisa macala ukusikeka okanye ulusu olaphukileyo, ngapha kwamehlo, okanye kubantwana abangaphantsi kweenyanga ezimbini ubudala. Isenokubangela ukucaphuka kulusu olubuthathaka, ukuyeka ukusetyenziswa ukuba kukho ukucaphuka okanye irhash; jonga uluhlu lwezithako ngaphambi kokusebenzisa ukuba uneempawu zokwaliwa komzimba. Gcina kude nokufikelela kwabantwana. Kwimeko yokudibana kwamehlo, gungxula ngamanzi amaninzi. Kwimeko yokucaphuka kolusu hlamba isikhumba kwangoko ngamanzi amaninzi, usebenzisa isepha ukuba ikhona. Funa unyango ngokukhawuleza ukuba ukucaphuka kuyaqhubeka.
Susa umphezulu, susa i-foil, ukhanyise phezulu, ukondle ukutya ngokuvula, kwaye ususe ngobumnene ukususa usule.Susa izandla ngokususa iintsholongwane kunye neebhaktiriya Emva kokusetyenziswa, vala umphezulu ukugcina izosula zifumile. Musa ukugungxula, nceda ulahle inkunkuma emva kwenkunkuma. Nceda uphinde usebenzise i-canister apho kunokwenzeka.
Ubomi beShelf iminyaka emi-2 ukuba isikhongozeli esitywiniweyo esivuliweyo. Gcina kwindawo epholileyo neyomileyo. Amaqondo obushushu afudumeleyo angabunciphisa ubomi beshelfu okanye omise imisuli. Ngamana ungalahla amanye amalaphu kunye nomphezulu womthi.
Egqithileyo Yenza ngokwezifiso iipesenti ezingama-75 zotywala kwangoko kwi-Gel Hand Sanitizer
Okulandelayo: Kubulala iipesenti ezingama-99 zeentsholongwane ezinobungozi
Ukucoca utywala okusekwe etywaleni
utywala osula izandla
utywala isula izandla
utywala busula amanzi
Iintsholongwane zotywala ezibulala iintsholongwane
wosula utywala oyinyumba
Factory kwizinga eliphezulu Imilinganiselo 80 ubalo Sur ...
Factory OEM 80s wosula ingxowa zokucoca ...
Ukunciphisa ngempumelelo iibhaktheriya ezingama-75% zoTywala ...
Factory OEM umthamo omkhulu 750 ubalo multipurp ...